MANERY ny olona hiasa ireto lehilahy ireto. Jereo ilay lehilahy izay mikapoka ny iray amin’ny mpiasa amin’ny karavasy. Avy amin’ny fianakavian’i Jakoba ireo mpiasa ary antsoina hoe Israelita. Ireo lehilahy manery azy hiasa dia Ejipsianina. Nanjary andevon’ny Ejipsianina ny Israelita. Ahoana no nahatonga izany?
Nandritra ny taona maro dia niaina tamim-piadanana tany Ejipta ny fianakaviamben’i Jakoba. I Josefa, ilay lehilahy nalaza indrindra tany Ejipta nanarakaraka an’i Farao, no nikarakara azy ireo. Maty anefa i Josefa tatỳ aoriana. Dia nisy Farao vaovao iray izay tsy tia ny Israelita, tonga mpanjakan’i Ejipta.
Hizara Hizara Nanapaka Tany Ejipta ny Mpanjaka Ratsy Iray
my tant. 27